Edere site Tranquillus | Feb 3, 2022 | Na weebụ
Ịma aka ANSSI, FCSC na-enye ohere ka ndị egwuregwu niile, ndị na-eto eto na ndị agadi, nwalee nkà ha n'ọtụtụ ule dị iche iche nke ndị ọkachamara ANSSI mere. Ọ bụrụ na ị nọ n'agbata afọ 14 na 25, ị nwekwara ike ịgbalị ịbanye n'òtù mba nke ga-anọchi anya France na mbipụta 2022 nke asọmpi Europe.
Soro na asọmpi na webụsaịtị FCSC!
A ga-emeghe ndebanye aha n'adreesị a: https://france-cybersecurity-challenge.fr/
Ụzọ ndebanye aha abụọ iji sonye na FCSC:
Maka ndị egwuregwu gbara afọ 14 ruo 25 chọrọ isonye otu France wee sonye naIhe ịma aka nchekwa Cyber ​​​​Europe (ECSC): ngalaba nke obere na nke okenye. Maka ndị ọzọ niile na-anụ ọkụ n'obi: n'ụdị
A ga-eche gị ihu ihe dị ka ule iri anọ dị iche iche dị iche iche, ma n'ihe siri ike na nka, na ụdị Crypto, Reverse, Pwn, Web, Forensics, Hardware wdg. FCSC bụ asọmpi mepere emepe maka mmadụ niile: emebere mmemme pụrụ iche maka ndị ọhụrụ na ụwa CTF ma chọọ ịmụta ụfọdụ isi!
A ga-ebipụta mmemme ndị a n'ịntanetị site na ụbọchị mbụ, ị ga-enwe ike isonye n'oge ọ bụla.
France Cybersecurity Challenge (FCSC) alaghachila: ndị otu France na-achọ ndị nnọchi anya ya! Ọnwa Abụọ 24, 2022Tranquillus
GỤỌ Ebe dị anya, ihe nkpuchi, nri: mgbanwe ọhụrụ metụtara ọrịa Covid-19
gara agaSaịtị ọhụrụ iji kwado ngagharị na ịnweta ọrụ
-esonụKedu ihe bụ nkwụchi ụtụ?
Ịkwado onye ọrụ na ezumike ọrịa iji zere mgbasa nke ọkachamara ma kwadebe maka nlọghachi ha